ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၇-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၇-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- အဓမ္မ သိမ်းထားသည့် လယ်မြေများထဲမှ ဧက ၂၀ ကို သမ္မတ ယူထား click
- သမ္မတ တိုင်းမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က စိုက်ခွင့်ပြုခဲ့သော ရော်ဘာစိုက်ခင်းများ ပြန်စိုက်လို click
- နတ္တလင်း ထွန်တုံးတိုက်ပွဲတွင် ကူညီခဲ့သူများကို တရားစွဲဆို click
- အသိမ်းခံရသော မြေတွင် ပြန်ထွန်ယက်သည့် နောင်ချို တောင်သူအချို့ အဖမ်းခံရ click
- ကြီးမားလာသော မြေယာပြသနာနှင့် တရားမျှတစွာ ဖြေရှင်းခြင်း click
- ဖခင်အတွက် အသေခံမည်ဟုဆိုကာ မြို့နယ်မှူးကားရှေ့ လှဲအိပ်လိုက်သည့် အမျိုးသမီး click
- သပိတ်ကျဉ်းဒေသခံများ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ စိုးရိမ်နေ click
- စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ပြဿနာ KNPP နှင့် အစိုးရတို့ သဘောတူညီမှု မရသေး click
- The Voice Weekly ဂျာနယ် သိစေရန် SSPP အကြောင်းကြား click
- KIO အဖြစ် သံသဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဦးဘရန်ရှောင်အမှု အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်ပေးမည့်ရက် ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်း click
- ရှမ်းမြောက် KIA တပ်ခွဲ ၅ နှင့် အစိုးရတပ်များ တပ်စခန်းနေရာလု တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲ click
- ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာကို အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနည်းဖြင့် မကုစားနိုင် click
- တိုင်းရင်းသားများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာတပ်တော်တွင် ရေရှည်စီမံကိန်းရှိနေ click
- ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကူညီပံ့ပိုးရန် ကွန်ရက်ဖွဲ့ click
- လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ် ၁၅ နေရာအတွက် ပြန်ရွေးကောက်ဦးမည် မဟုတ် click
- မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက် ငါးနှစ် ထပ်တိုး click
- ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရန် သျှမ်း/တောင်လူငယ် ၅ မြို့နယ် တွေ့ဆုံ click
- လွှတ်တော်အမတ် ၂ ဦးနဲ့ ရှမ်းမြောက်တောင်တန်း မူးယစ်နယ်မြေ (ဆောင်းပါး) click
- မလေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းက မြန်မာ ၂၀၀ ကို လေယာဉ်စင်းလုံးငှား ပြန်ပို့မည် click
- အပြန်စရိတ်မရှိသည့် အလုပ်သမားများကို လေယာဉ် အခမဲ့ စီစဉ်ပေးမည် click
- တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကို ပိတ်ခြင်းက ယခင် အစိုးရလက်ထက် ပြန်ရောက်သလိုဟု ဆို click
- တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးနဲ့ အစိုးရရဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု (ဆောင်းပါး) click
- တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း ဂယက်ကို ဘယ်လို မြင်ကြသလဲ (ဖိုရမ်) click
- ဗမာပြည်အတွက် ရှာရီရာ လက်ဆောင်ယူလာတဲ့ ၉၆၉ - အပိုင်း (၅) click
- မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လွှတ်တော်မှာ ကန့်ကွက်တဲ့ အမတ် ၂ဝ၁၅ မဲမရရန် စည်းရုံးမည်ဟု မြစေတီဆရာတော်ဘုရား မိန့်ကြား (ရုပ်သံ) click
- အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုတာ ပုထုဇဉ် လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုပ် (အင်တာဗျူး) click
- ဗြိတိန်ခရီးစဉ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပညာရေးအကြောင်း လေ့လာခဲ့ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ပြော (ရုပ်သံ) click
- ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ပဋိပက္ခ ဂရုပြု သတင်းရေးသားနည်းပညာသင်တန်း ပြုလုပ် click
- လူထုအရေးလည်း ဦးစားပေးကြစေလို (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- နောက်ကြောင်းမပြန်ရေး စိန်ခေါ်မှု ၁ဝ ချက် (ဘာသာပြန် ဆောင်းပါး) click
- ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ အတည်ပြုပြီးမှ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ ရွေးချယ်ရန် လွှတ်တော် အတည်ပြု click
- ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ တင်ဒါ လွှတ်တော် မကန့်ကွက်တော့ click
- ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ ရွေးချယ်မှု ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ရှင်းလင်း click
- ဆက်သွယ်ရေးတင်ဒါကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ဟု ဦးရဲထွဋ် ပြော click
- ဆက်သွယ်ရေးတင်ဒါ ရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကို မေးမြန်းချက် (အသံ) click
- တယ်လီနော်ကုမ္ပဏီက မြန်မာဝန်ထမ်းများကို အများဆုံး ခန့်အပ်မည် click
- အိန္ဒိယ-မြန်မာ-ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့-တရုတ် လေးနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး ကားလမ်း ဖောက်လုပ်ရန် တရုတ်က အဆိုပြု click
- မြန်မာ့ဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးရန် ဒေါ်လာ ဘီလီယံများစွာ လို click
- ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသနေ ပြည်သူများ၏ သဘောထားများကို အစီရင်ခံခြင်း (ဆောင်းပါး) click
- ကိုကာကိုလာ နမူနာ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများအတွက် Home Stay အစီအစဉ် ခွင့်မပြုသေး click
- သုဝဏ္ဏဘူမိ သထုံမြို့ဟောင်း တူးဖော်မည် click
- မန်းတွင် သက်တမ်းကျော် လေလံကားများ မှတ်ပုံတင်ခွင့် မရှိတော့ click
- မြ၀တီမြို့တွင် MOU ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ကယန်းအမျိုးသမီး ၃၀ ကျော် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် အခက်ကြုံ click
- မုံရွာတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ရိုက်ပွဲဖြစ်၊ တဦး သေ click
- အရက်မူးပြီး စကားများရာက လူသတ်မှုဖြစ် click
- မြစ်ကူးတံတား ဆောက်မည့် သတင်းကြောင့် ဒလတွင် မြေဈေး တက် click
- လမ်းဘေးဆိုင်များ ပိတ်သိမ်းရန် တောင်ကြီးစည်ပင် စာထုတ် click
- ပညာရေး ပရဟိတလုပ်ငန်းများ လုပ်ရန် မြေလိုနေဟု လူမှုအဖွဲ့အစည်း BG ပြော click
- ရက္ခအလင်းတန်းမှ မင်းပြားတွင် ပရဟိတ စာသင်ကျောင်းဖွင့် click
- မေရီချက်ပ်မင်းတွင် မူလတန်းကျောင်းသားသစ် နှစ်ဆတိုး click
- ကျေးလက်ဒေသ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရန် ဒေါ်လာ ၁၄ သန်း အသုံးပြုမည့် Foundation တည်ထောင် click
- ယူကေ ဥရောပတက္ကသိုလ်တွေအဖွဲ့က ချီးမြှင့်မယ့် ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ပြီ click
- စင်ကာပူက မန်ချက်စတာ မက်ထရိုပိုလီတန်တက္ကသိုလ် အင်ဂျင်နီယာ တိုက်ရိုက် ပရိုဂရမ် click
- သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွေအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီ click
- ပြည်ပမှာ ပညာသင်ကြားရာဝယ် (သူ့အမြင်) click
- ပရဟိတ ရန်ပုံငွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံး၍ ရှာလိုက်နိုင်သည့် မန်းက လူငယ်ဆရာဝန်များ click
- ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနှင့် သဘင်ပညာရှင်များစွာ ပါဝင်သော ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပမည် click
- မသန်စွမ်းသူအပေါ် နားလည်စေရန် ပညာပေးရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်မည် click
- မသန်စွမ်းသူများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ (သတင်းဓာတ်ပုံ) click
- ခွန်းဆင့်နေခြည်လည်း facebook အဟက်ခံရပြန် click
- အေဒီ ၁၀ ရာစုနှင့် ၁၁ ရာစုလက်ရာ ကြာပန်းပွင့်ပုံသဏ္ဍန် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတော်တခု ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် တူးဖော်တွေ့ရှိ click
အရွေးခံရတဲ. မိုဘိုင်းဖုန်း အော်ပရေတာ ၂ ခုက
ဖုံးပြောခ ဒီထက် သိသိသာသာ လျှော.ပေးဖို.နဲ. ၊
မြန်နှုန်းမြင်. အင်တာနက် ကို သက်သာတဲ.နှုန်းထား
နဲ. သုံးရဖို.တွေ ကို အာမခံပါသလား ၊
ဖုံးပြောခ ကို ၁ မိနစ် ဘယ်လောက် ထားပေးမယ်
MPT နဲ. ရတနာပုံ တို.ကအရွေးမခံဘဲ ဘာလို.လုပ်ကိုင်ခွင်.ရကြတာလဲ။
ကြိုးနီ စနစ်ကြီး က မပျောက်သေးပါလား ။